ဖုန်းအတွက် Root မလိုပဲ Screen Recording ပြုလုပ်ပေးနိုင်မယ့် AZ Screen Recorder (7.1MB) « XMS-MMF
ဖုန်းအတွက် Root မလိုပဲ Screen Recording ပြုလုပ်ပေးနိုင်မယ့် AZ Screen Recorder (7.1MB)
ဖုနျးအတှကျ Root မလိုပဲ Screen Recording ပွုလုပျပေးနိုငျမယျ့ AZ Screen Recorder (7.1MB)
မိမိရဲ့ ဖုနျးမှာ အကွောငျးတဈစုံတဈခုကွောငျ့ ပဲဖွဈဖွဈ ၊ မိမိ အခကျအခဲကို တငျပွရနျပဲဖွဈဖွဈ တခွားသူတဈယောကျကို မိမိ ဖုနျးကနေ Tutorial သဘောမြိုးပဲဖွဈဖွဈ သငျကွားပွသပေးလိုတဲ့အခါ ပဲဖွဈဖွဈ Screen Recording လုပျဖို့ လိုလာပါတယျ။ Screen Recorder တှရေဲ့ 89% လောကျကတော့ ဖုနျးက Root ရှိမှအဆငျပွတောမြားပါတယျ။ ဒါမှမဟုတျရငျတောငျ သုံးရတာ အဆငျမပွပေါဘူး။ ရုပျထှကျ မကောငျးတာ ၊ အသံမဖမျးပေးနိုငျတာ ၊ water mark Logo ကွီးပါနတော အစရှိသဖွငျ့ Free ဆိုတဲ့ အတိုငျး အခကျအခဲအမြိုးမြိုးနဲ့ကွုံရပါတယျ။
ယခု မိတျဆကျပေးမယျ့ app လေးကတော့ အဆိုပါ အခကျအခဲတှေ ကနလေုံးဝကငျးဝေးစမှောဖွဈပါတယျ။ Free ဆိုပမေယျ့ အတျောလေးကောငျးတဲ့ app ပါ။
AZ Screen Recorder ပဲဖွဈပါတယျ။ File Size အနနေဲ့လညျး သေးငယျပါတယျ။ 7MB ပမာဏသာ ရှိပါတယျ။
သူ့ရဲ့ အားသာခကျြ အခြို့ကတော့ Resolution ကိုမိမိ အလိုရှိသလို ခြုံ့နိုငျခြဲ့နိုငျခွငျး။ မိမိ ရဲ့ အမှတျအသား Logo သို့ စာသားကို watermark အဖွဈ ထညျ့သှငျးနိုငျခွငျး …. အစရှိတဲ့ အခကျြတှပေဲဖွဈပါတယျ။ ဆောငျထားသငျ့တဲ့ app လေးတဈခုဖွဈတာကွောငျ့ Mr.Fone ရဲ့ Customer မြားအတှကျ မိတျဆကျ တငျပွပေးလိုကျရပါတယျခငျဗြာ။
Download Here >>> http://bit.ly/xmsazscr
မိမိရဲ့ ဖုန်းမှာ အကြောင်းတစ်စုံတစ်ခုကြောင့် ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ မိမိ အခက်အခဲကို တင်ပြရန်ပဲဖြစ်ဖြစ် တခြားသူတစ်ယောက်ကို မိမိ ဖုန်းကနေ Tutorial သဘောမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် သင်ကြားပြသပေးလိုတဲ့အခါ ပဲဖြစ်ဖြစ် Screen Recording လုပ်ဖို့ လိုလာပါတယ်။ Screen Recorder တွေရဲ့ 89% လောက်ကတော့ ဖုန်းက Root ရှိမှအဆင်ပြေတာများပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်တောင် သုံးရတာ အဆင်မပြေပါဘူး။ ရုပ်ထွက် မကောင်းတာ ၊ အသံမဖမ်းပေးနိုင်တာ ၊ water mark Logo ကြီးပါနေတာ အစရှိသဖြင့် Free ဆိုတဲ့ အတိုင်း အခက်အခဲအမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံရပါတယ်။ ယခု မိတ်ဆက်ပေးမယ့် app လေးကတော့ အဆိုပါ အခက်အခဲတွေ ကနေလုံးဝကင်းဝေးစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Free ဆိုပေမယ့် အတော်လေးကောင်းတဲ့ app ပါ။
AZ Screen Recorder ပဲဖြစ်ပါတယ်။ File Size အနေနဲ့လည်း သေးငယ်ပါတယ်။ 7MB ပမာဏသာ ရှိပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အားသာချက် အချို့ကတော့ Resolution ကိုမိမိ အလိုရှိသလို ချုံ့နိုင်ချဲ့နိုင်ခြင်း။ မိမိ ရဲ့ အမှတ်အသား Logo သို့ စာသားကို watermark အဖြစ် ထည့်သွင်းနိုင်ခြင်း …. အစရှိတဲ့ အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ app လေးတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် Mr.Fone ရဲ့ Customer များအတွက် မိတ်ဆက် တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။